Nezve AMTHING - Chinhu.
Isu dhizaini dhizaini iyo inotenda musimba rehukuru dhizaini.
Isu tiri kambani yepasirese inopa zvipfeko zvakaenzana kune vaviri vacho. Isu tine timu yehunyanzvi yevashandi vanokwanisa uye vanoshanda nesimba. Chikwata chedu chinoshanda nesimba kuve nechokwadi chemhando yezvinhu. Ivo vane hunyanzvi uye vekugadzira vagadziri vanongo gadzira edu ekugadzira Iwe unogona kugadzirisa yako t-shati, majuzi, hoodi, uye zvipfeko zvinoenderana nesarudzo yako kubva kune yedu webhusaiti. Unogona kugadzira chipfeko chevaviri vako zvinoenderana chero chiitiko. Iwe unogona kugadzira yako shati inowirirana neyako prewedding kupfura, roorano yegore, mapato ekuberekwa, kufamba, uye zvimwe zvakawanda zviitiko.
Isu tiri pabasa redu rekukubatsira iwe kuti uwedzere mavara mukunakidzwa kune hukama hwako. Isu tinopa akafanana t-shirts, hoodies, majuzi, uye zvipfeko pasi pebhajeti uye zviri pamitengo inonzwisisika Kupa zvinhu zvemhando yepamusoro ndiko kukoshesa kwedu. Isu tinopa sevhisi yepasirese kuti zviite nyore; unogona kuisa odha yako kubva kune chero chikamu chenyika.Kuzadzikiswa kwezvaunoda uye kudiwa ndiro rekutanga basa rechikwata chedu. Iwe haunganyadziswe nezvehunhu uye dhizaini yezvipfeko.
Tiri kupa masevhisi kune vatengi vedu pasirese.
Isu tiri timu yehunyanzvi.
Hunyanzvi huchaonekwa muzvigadzirwa zvedu.
Tine timu yekugadzira yekugadzira zvipfeko zvako zvinoenderana nezvaunoda uye chishuwo chako.
Hunhu hwezvinhu ndiko kwedu kwekutanga.
Isu tinobata nezvose zviitiko zvehembe.
AMTHING Kufananidza Couple T-shirts, Hoodies, Sweaters, uye Outfits.
Kugamuchirwa ku AMTHING, yepasirese online chitoro kambani. Iyi ndiyo yepamhepo webhusaiti webhusaiti kune akati wandei akafanana zvipfeko zvako.
Wakaneta uye kufinhwa nemadhirezi ezuva nezuva nezvipfeko?
Isu takagadzirisa matambudziko ako ese. Isu tinogadzira zvipfeko zvinoenderana neyako kuravira uye modhi. Iwe unogona kuraira akati wandei anoenderana t-shirts, hoodies, majuzi uye zvipfeko zvako iwe nemumwe wako. Kunyangwe iwe uchida kusarudza kubva kumagadzirirwo edu kana kugadzirisa maererano neyako chiitiko, zviri kwauri. Iwe unogona kupfeka izvi zvipfeko kuzviitiko zvakasiyana kuti chiitiko chako chiwedzere kunaka uye chisingakanganwike.
Isu tinofara kukupa iwe yakanakisa zvigadzirwa, ine tarisiro pane akadai maitiro, kureva, mhando yemhando, inokwezva dhizaini nezana muzana muzana kugutsikana.
AMTHING yakavambwa mu2010; AMTHING inopa vatengi nzira iri nyore yekutenga kubva kune akasiyana zvigadzirwa zvehupenyu pamitengo inonzwisisika uye inokwezva. Unogona kuisa odha yako kubva kune chero chikamu chenyika kuburikidza newebsite yeduwww.amthing.com
Iwe unogona kusarudza chero dhizaini kubva kukatalog yedu kana kutirovera runhare kuti upfeke chipfeko chako zvichienderana nezvaunoda uye nechishuwo chako. Taura nesu kuburikidza neemail kana isa odha neyako dhizaini; nyanzvi dzedu dzichakubatsira uye kuve nechokwadi chekukupa iwe yakanakisa uye yekugadzira mazano.